GhostCommander plugin: GDrive 1.03 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.03 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား စာၾကည့္တိုက္မ်ား & အစမ္း GhostCommander plugin: GDrive
GhostCommander plugin: GDrive ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ်ဦးက plug-in ကိုကို Google Drive ကို™ cloud storage ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့သင် Drive ကိုရန်နှင့်မှဖိုင်များကို upload နှင့် download လုပ်ပါစေဟူသော "ဝိညာဉ်တော်တပ်မှူး file manager ကို" ပလီကေးရှင်းဖို့။
plugin ကိုဝိညာဉ်တော်တပ်မှူးလျှောက်လွှာကိုကိုယ်တိုင်ကမပါဘဲအလုပ်မလုပ်ပါဘူး! ဒီ plugin ကို download လုပ်ပြီး install ထို့နောက်ပထမဦးဆုံးမှာအဓိကအ app ကို install လုပ်ပါ။
plugin ကို, ပစ်လွှတ်သောဝိညာဉ်တော်တပ်မှူးသုံးစွဲဖို့, ထို့နောက် '' Menu ကို> တည်နေရာ> Home> Google Drive ကို 'ရန် navigate ။
ခွင့်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့ Google Account ကို Select လုပ်ပါ။
ခွင့်ပြုချက်နှင့်တပြိုင်နက်ထို application ကိုလာမည့်နှင့်နောက်ဆက်တွဲပြေးရက်နေ့တွင်ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းမဟုတ်ပါ။ drive ကို files တွေကိုမဆိုလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမရှိဘဲလက်လှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုချေးငှားသို့မဟုတ်ပါကအခိုးခံခဲ့ရလျှင်, သင်၏ Drive ကို files တွေကိုခိုးယူရလိမ့်မည်။
GhostCommander plugin: GDrive အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
GhostCommander plugin: GDrive အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
GhostCommander plugin: GDrive အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
GhostCommander plugin: GDrive အား အခ်က္ျပပါ
prozac4me စတိုး 9.95k 2.12M
GhostCommander plugin: GDrive ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း GhostCommander plugin: GDrive အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.03
ထုတ်လုပ်သူ Ghost Squared
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://gc-gdrive.sourceforge.io/privacy_policy.html
App Name: GhostCommander plugin: GDrive
Release date: 2019-09-04 16:56:26
လက်မှတ် SHA1: 81:0E:C1:0D:31:04:87:E8:AE:95:2D:6D:63:3F:C9:07:73:2F:E5:29
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ghost Squared
နယ်မြေ (L): Princeton Junction
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): New Jersey
GhostCommander plugin: GDrive APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ